सहयोगीको भरमा भन्सार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
सहयोगीको भरमा भन्सार
श्रावण ११, २०७५ जयबहादुर रोकाया
हुम्ला — हिल्सा नाकालाई सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारी बेवास्ताका कारण यारी भन्सार कार्यालय पुन:स्थाना भएको छैन । उत्तरी सीमा हिल्साको भन्सार कार्यालय दुई सहयोगीको भरमा छ ।
चीन सरकारले दोस्रो प्राथामिकतामा राखेको हिल्सा नाकाबाट वर्षाको समयमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको छ ।
द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै कार्यालय सदरमुकाम विस्थापित भएको थियो । स्थानीय कमल बोहोराका अनुसार सरकारले पठाएका कार्यालय प्रमुख एक साता सदरमुकाम बसेर काठमाडौं फर्किएका छन् । सीमामा दुई कार्यालय सहयोगी बसेर सामान्य भन्सार उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण राजन रेग्मीले भन्सारले संकलन गरेको राजस्वबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।
चीन सरकारले केरुङपछि हिल्सा नाकालाई प्राथामिकता दिँदै आएको छ । चीनले सीमासम्म सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । चीन सरकारले भन्सार, अध्यागमनलगायत सुरक्षा निकायका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।
चीन सीमा हिल्साबाट दक्षिण नाम्खा गाउँपालिकाको ओखरथलासम्म ७२ किलोमिटर सडकमा चीनबाट खरिद गरिएका दुई दर्जनभन्दा बढी गाडी सञ्चालन हँुदै आएका छन् । सीमामा सरकारी निकाय नहुँदा सबै गाडी अवैध तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती गाडीमा रुट परमिट र नम्बर प्लेटसमेत छैन । गाडी धनीले आफ्ना गाडी वैधानिक बनाउन चाहे पनि सीमामा भन्सार, यातायातजस्ता कार्यालय नहुँदा समस्या भएको जनाएका छन् । सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको चौकी मात्र छ । अन्य कुनै सरकारी निकाय छैनन् ।
हिल्सा नाकाबाट हुम्लालगायत बाजुरा र बझाङका बासिन्दाको समेत आवतजावत हुने गर्छ । सीमामा सरकारी निकायको उपस्थिति नहुँदा करोडौंको सामान अवैध ओसारपसार हुँदै आएको छ । हिल्सा नाका भएर बर्सेनि च्याउ, वन लसुनजस्ता जडीबुटी अवैध तरिकाले निर्यात हुने गरेका छन् । त्यस्तै हस्तकलाको सामानसमेत चीन निर्यात हुने गरेको छ । तिब्बतबाट लत्ताकपडा, तयारी पोसाक, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री आयात हुँदै आएको स्थानीयले जनाए ।
आयात र निर्यात दुवै अवैध भएकाले पटकपटक कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि बेवास्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ । यही नाका प्रयोग गरी बर्सेनि हजारौं भारतीय तीर्थयात्रीले आवतजावत गरिरहेको स्थानीयले जनाए । स्थानीयका अनुसार सरकारले बेवास्ता गरेपछि बर्सेनि करोडौं राजस्व गुम्दै आएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५५
डा. केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य
आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने
उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने
मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने
श्रावण ११, २०७५ अतुल मिश्र, दुर्गा खनाल
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिनेलगायत नौबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् ।
१५ औं आमरण अनशनको २७ औं दिन बिहीबार राति डा. गोविन्द केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउँदै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमा । तस्बिर : कविन अधिकारी । कान्तिपुर
सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन तर यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजका हकमा भने सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्नेखालको सहमति भएको छ । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति छ ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै डा. गोविन्द केसी । तस्बिर : कबिन अधिकारी
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५१
परीक्षण तयारीबिनै रोकियो तरकारी
सोलुमा घट्याे 'तोकमारु’
पर्यटन समिति गठनमा असन्तुष्टि